“Twirling Bâton”: hanampy ny Malagasy ny iraisam-pirenena | NewsMada
“Twirling Bâton”: hanampy ny Malagasy ny iraisam-pirenena
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tetsy amin’ny Dojo Esca Antaminena, ny fampiofanana “Twirling bâton”, ho an’ny ankizy, ny tanora ary ny mpampianatra avy eto Analamanga sy avy Antsirabe, avy any Toamasina, avy any Miarinarivo sy ny maro hafa. Tohin’ny fangatahana fiaraha-miasa tamin’ny federasiona iraisam-pirenena nataon’ny FIMTBM (Fikambanan’ny mpampianatra twirling bâton eto Madagasikara) ny nahatonga izao fifampizarana traikefa izao.
Tonga eto an-toerana ny manampahaizana manokana, ahitana mpanazatra, atleta ary mpitsara avy any ivelany miisa dimy mianadahy manolotra io fampiofanana io, mandritra ny dimy andro. Araka ny hita omaly, fampiharana avy hatrany ny nisantarana ny fotoana, nanomezana ireo ankizy sy ny mpampianatra fampianarana fototra sy tsara ho fantatra amin’ity taranja ity. Nanambara ny tomponandraikitra eo anivon’ny fikambanana, Ramamonjisoa Joseph Bernard, fa taranjam-panatanjahantena ny twirling satria mampiasa vatana. Tsahivina, hazo lalaovina sy haodina amin’ny tanana ity taranja Twirling ity, raha hazavaina tsotsotra. Tsy sarotra saingy mila fifantohana sy teknika ny filalaovana azy, araka ny fanazavani’ireo teknisiana mpikirakira izany. Isan’ny tena manampy betsaka ny zaza sy ny ankizy amin’ny fivelaran-tsaina ny fiangaliana ity taranja iray ity.
Na mbola vitsy aza, hoy ny tomponandraikitra, ny mikatroka azy eto amintsika, hita efa miroborobo ihany nanomboka tamin’ny taona 2005 niorenany. Eo amin’ny 200 mahery eo amin’izao ny isan’ny mpiangaly ity taranja ity ary efa miezaka manerana ny Nosy ny tomponandraikitra. Taranja isan’ny mivondrona ao anatin’ny FIHEZAMA ihany koa ny Twirling.
Tanjona ny hahatsapan’ny minisitera sy ny fitondrana ny ezaka ataon’izy ireo ka ahafahana manome alalana amin’ny fananganana federasiona. Izany indrindra ny anton’ny fampiofanana toy izao sy nahatonga ny federasiona eran-tany handefa ireto manampahaizana ireto.